Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziQhekezayo zaseAfghanistan » I-Taliban ifuna iTurkey ibaleke kwisikhululo senqwelomoya saseKabul
Iindaba eziQhekezayo zaseAfghanistan • Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zaseTurkey zokuPhula • Iindaba ezahlukeneyo
I-Taliban ifuna iTurkey ibaleke kwisikhululo seenqwelomoya saseKabul
Umongameli wase-Turkey u-Erdogan uthe ukuzola kufuneka kubuyiselwe e-Kabul ngaphambi kokwenza isigqibo kwisikhululo seenqwelomoya, esongeza ukuba kukho umngcipheko wokufumana "into engenamsebenzi" kwinto ekunokuba nzima ukuyichaza inikwe ukungaqiniseki malunga nomsebenzi onokwenzeka.
I-Turkey ithathe isigqibo malunga nesicelo seTaliban sokunceda ukuqhuba isikhululo seenqwelomoya saseKabul.
Umongameli wase-Turkey u-Recep Tayyip Erdogan uthi iingxoxo kunye neTaliban ziyaqhubeka.
Ezi ntetho zabanjwa kwiziko lezomkhosi kwisikhululo seenqwelomoya saseKabul apho umzi wommeli waseTurkey umi khona.
I-Turkey ibambe iingxoxo zayo zokuqala kunye ne-Taliban ngokubhekisele kuncedo lokuqhuba isikhululo senqwelomoya kwisixeko seenqwelomoya namhlanje kwiziko lezomkhosi kwisikhululo seenqwelomoya i-Kabul kwisikhululo senxusa lase-Turkey.
Umongameli wase-Turkey u-Recep Tayyip Erdogan
Ngokuka-Mongameli wase-Turkey u-Recep Tayyip Erdogan, u-Ankara ebesavavanya isithembiso sika-Taliban sokunceda ekusebenzeni. Isikhululo senqwelomoya saseHamid Karzai (KBL) eKabul kwaye ezinye iintetho ziya kufuneka ngaphambi kokuba kwenziwe isigqibo.
"Siye sabamba intetho zethu zokuqala kunye neTaliban, eyahlala iiyure ezintathu nesiqingatha," utshilo u-Erdogan. "Ukuba kunyanzelekile, siza kuba nethuba lokubamba iintetho ezinjalo kwakhona."
I-Turkey yayinamakhulu emikhosi e-Afghanistan njengenxalenye yemishini ye-NATO, kwaye yayijongene nokhuseleko kwisikhululo seenqwelomoya kule minyaka mithandathu idlulileyo.
Ukuphendula kugxeko lwasekhaya malunga nokuzibandakanya kweTurkey neqela labanqolobi, u-Erdogan uthe i-Ankara "ayinabunewunewu" bokuma bengenzi nto kulo mmandla ungazinzanga.
“Awunokwazi ukuba balindeleni na okanye yintoni esiyilindeleyo ngaphandle kokuthetha. Yintoni uthethathethwano, mhlobo wam? Obu bubuchule, ”utshilo u-Erdogan.
I-Turkey yayiceba ukunceda ukukhusela nokuqhuba isikhululo seenqwelomoya saseKabul, kodwa ngolwesiThathu yaqala ukukhupha imikhosi e-Afghanistan-uphawu olubonakalayo lwe-Ankara ishiya le njongo.
U-Erdogan uthe i-Taliban ngoku ifuna ukongamela ukhuseleko kwisikhululo seenqwelomoya, ngelixa ibonelela i-Ankara ithuba lokuqhuba ulungiselelo lwayo.
Uthe iibhombu zokuzibulala ezibulale abantu abali-110 ubuncinci, kubandakanya nemikhosi yase-US e-13, ngaphandle kwesikhululo seenqwelomoya ngeentsuku zokugqibela zomzamo wokufuduka ngolwe-Sihlanu ubonise ukubaluleka kokwazi iinkcukacha zendlela ihabhu lomoya eliza kukhuseleka ngayo.
U-Erdogan uthe ukuzola kufanele kubuyiselwe eKabul ngaphambi kokwenza isigqibo kwisikhululo seenqwelomoya, esongeza ukuba kukho umngcipheko wokufumana "ukufunxwa" kwinto ekunokuba nzima ukuyichaza ngenxa yokungaqiniseki malunga nomsebenzi onokubakho.
"UTaliban uthe:" Siza kuqinisekisa ukhuseleko, usebenza kwisikhululo seenqwelomoya '. Okwangoku asikathathi sigqibo ngalo mbandela, ”utshilo u-Erdogan.
I-Ankara ukuza kuthi ga ngoku ihambise ubuncinci amajoni ama-350 kunye nabantu abangaphezu kwe-1,400 abavela e-Afghanistan okoko kuthathwe iTaliban kule nyanga.
U-Erdogan, owayekhe wagxeka iTaliban njengoko yayitshayela ilizwe lisinga eKabul, wathi iTurkey yayijolise ekugqibezeleni ukukhutshwa kunye nokurhoxa kwamajoni ngokukhawuleza.